MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 823
>Mar Mar Aye 263
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် အမှတ် (၂၆၃) ပတ်ပျိုး၊ စောင်းကြိုး မာမာအေး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၉ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် မာအေးချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတ ဝါသနာရှင်တွေ အားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ၊ ရှေ့နှစ်ပတ် ကတည်းက ဂီတဝါသနာရှင် လေ့လာသူ ကိုရီးယားရောက် တဦးက မေးထားတဲ့ ဂီတကိစ္စတွေ ပြောပေးနေခဲ့ပါတယ်ရှင်၊ သူ့ကို ပြန်ပြောခဲ့ရင် အားလုံးအဖို့ ဂီတဗဟုသုတ ရနိုင်တာမို့လည်း ဆက်ပြီးတော့ ပြောပါရစေနော်။ မြဝတီမင်းကြီး ဦးစဟာ သီချင်းကြီးတွေ အများကြီး ရေးသွားပေမယ့် ပတ်ပျိုးတွေကိုတော့ သူ့လက်ထက်မှာ မတီးခဲ့နိုင်ဘူး။ ရှေ့တော်ပြေး မောင်မောင်သိုက်တို့အထိလည်း စောင်းကြိုးက (၇)ကြိုးပဲ တပ်သေးတာကြောင့်...
>Biography of Mahn Win Maung, President of Burma in 1957 (Part – 9)
> မန်းဝင်းမောင် အတ္ထုပတ္တိ အပိုင်း (၉) မှတ်စုမှတ်တမ်း ဖေဖေါ်ဝါရီ ၇ ရက် မြတောင် – တောရရွာသည် ဧရာဝတီမြစ်ညာဘက်ကမ်းမှာ ရှိပါတယ်။ မွန်းမတည့်မီ မြတောင်– တောရ တစ်ဖက်ကမ်းနေရာသို့ ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ နောက်ဆုံးပတ် ဖြစ်သဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ရေ ကျဆင်း စပြုပြီး မြစ်လယ်မှာ သောင်ထွန်း နေပါတယ်။ သောင်ကိုပတ်ပြီး သွားရမည်ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်နာရီခန့်ကြာမည့်အပြင် နေ့ခင်းနေ့လယ် အချိန်မှာ လိုက်မပို့လိုကြောင်း ကူးတို့သမားက ပါပါတို့ကို ပြောပြပါတယ်။ အကြောင်းမှာ နေ့ခင်း နေ့လယ်အချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်လေယာဉ်ပျံ လာရောက်ပစ်ခတ်တတ်ကြောင်းနှင့် မကြာမီကပင် ဂျပန်လေးငါးယောက် ကူးအပို့မှာ အင်္ဂလိပ်လေယာဉ်ပျံ လက်ချက်ကြောင့် ကူးတို့သမားများ အပါအဝင် အားလုံးသေခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ပါပါတို့တောင်းပန်...
>Singapore and Jr. Michael Faye’s writing
> စင်္ကာပူနှင့် လက်ဆော့သူတဦး၏လက်ရာဓာတ်ပုံသတင်းဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၉Bras Basah လမ်း၊ စင်္ကာပူအနုပညာပြတိုက် (Singapore Art Museum) ရှေ့ရှိ တရုတ်နှစ်ကူးအတွက် အလှဆင်ထားသော အရုပ်တခု၏ နဖူးပေါ်တွင် racist ဟု ရေးခြစ်ထားသည်ကို လွန်ခဲ့သည့် ၃ ရက်က တွေ့ရစဉ်။ “ဘယ်သူလုပ်သွားလဲမသိ။ ဒီမှာက မိသွားရင် တော်တော်အပြစ်ကြီးတာလေ။ နောက်တာပဲလား မကျေနပ်လို့လားတော့ မသိပါဘူး” ဟု စင်္ကာပူတွင် နေထိုင်သူတဦးက ပြောပြသည်။ အာဏာပိုင်တို့က ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အဆိုပါ စာသားကို ဖျက်ဆီးလိုက်သည်။ (ဓာတ်ပုံ – ကေအက်စ်) No tags for this post.
>Aung Way – Min Thu Wun 100 Years
> အဘ၏ အုတ်ဂူ၌ ပူဇော်ခြင်းအောင်ဝေးဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၉ (ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ် ရာပြည့် သို့) အို … ဟေမန္တညည်းသံတစသည်းထန်လှပါလား။ နှင်းမြူကြားကအဘအုတ်ဂူ၊ ညအဖြူမှာဘယ်သူ ငိုကြွေးနေတာလဲ။ ညရောင်၊ လရောင်ကြယ်ရောင် ပြိုးပြောက်၊ နှင်းသောက်အုံ့မင်သုဿန်လွင်မှာသင် ဘာကြောင့် ငိုသနည်း။ လေညှင်းမြေ့မြေ့တွန်းဝှေ့ဝှေ့၏၊ ဝေ့ဝေ့၀ိုက်ဝိုက်ပဲ့တင် ရှိုက်ဆဲရှိုက်ကြီးတငင် ငိုပြန်ပြီ။ ဖယောင်းဆီမီးညီးညီးလျှံလျှံ၊ ဖိတ်အန် လက်လက်အုတ်ဂူထက်မှာအို … မျက်ရည်တွေနဲ့ပါလား။ အလွမ်းကြီးစွပွင့်စည်းနီနီ၊ သင်းလှိုင်ကြည်သောနှင်းဆီမွှေးမြ၊ ဆွေးတဲ့ညမှာဘ၀နာကျင်သူ သင်လော။ ငိုရှိုက်သံလည်းတယံမလပ်၊ မပြတ်ညစဉ်သင်မော်ကွန်းထိုးအဘိုးရဲ့ အုတ်ဂူ၌။ သင် မည်သူနည်းငိုကြီးချက်မ၊ ည ည ည မှာအဘကို ဂုဏ်ပြုသူလား။ ဒို့အဘရဲ့မာနမဲ့လျှင်း၊ သိက္ခာရှင်းသည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဉာဏ်ပညာကိုခါခါဦးခိုက်၊ ကန်တော့ထိုက်စွာသင့်၌ အခွင့် ရှိသလော။ တခေတ် တခေတ်ဖက်ဆစ်တောထ၊ အဓမ္မကိုအဘ...
>WIn Paw Maung – Long Live Our Min Thu Wun
> သပြေညို ဘယ်လိုမှ မသေပါ ၀င်းပေါ်မောင် ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၀၉ “မိုးရေတက်ရေ တဖွေးဖွေး ကွင်းကျယ်အဝေးဝေး။ လယ်စောင့်တဲလေး ခြေတံရှည် မိုးကုပ်အောက်မှာတည်။ ကြာနီတပွင့် ဖြူတပွင့် တဲနှင့် ပနံတင့်။ ။ ” အူပည့်အစုံသိုႛ … No tags for this post.
>Min Thu Wun – 88 Poem
> မင်းသုဝဏ် – ၈၈ ကဗျာ ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၀၉ ပြန်လည်ဆန်းသစ် မော်ကွန်းကဗျာ No tags for this post.
>My Academy Sein – Burmese Academy is not for the "Lady"
> ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ပေးတဲ့ အကယ်ဒမီ၊ မိန်းမတွေကို ပေးဖို့ ဟုတ်ဘူး …မိုင်အကယ်ဒမီစိန်ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၀၉ အကယ်ဒမီတွေပေးတယ် ဆိုတော့ လူတိုင်း၊ ပရိသတ်တိုင်း စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ကြတယ်ပေါ့။ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ရမယ်ဆိုတာကလည်း အပြင်မှာ နံမည်ကြီးတဲ့ သူတွေ ရှိနေတော့လည်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တဲ့ အစီအစဉ်ကို မလွတ်တမ်းကြည့်လို့ ၀တ်စားဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုတွေ ကြည့်ပြီး သူကတော့ ရမယ်ထင်တယ် နဲ့ ထင်ကြေးတွေ ပေးကြပါတယ်။ နေပြည်တော် ဆိုတဲ့ အင်မတန် အလှမ်းဝေးတဲ့ နေရာကို တကူးတက ခက်ခက်ခဲခဲ သွားရောက်ကြတဲ့ မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေကို ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ မသွားလည်းခက် သွားရတာလည်းခက် မဟုတ်လား။ ဒီလိုနေရာမျိုးထက် ရန်ကုန်မှာသာ ကျင်းပရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲလို့ သူတို့ရင်ထဲမှာ တောင်းဆိုနေမယ် ဆိုတာ ပရိသတ်တွေ...
>Burmese Traditional Hta Ma Ne Pwe at ShweDagon Pagoda
> နှစ်စဉ် ကျင်းပမြဲ လတပို့တွဲ ရွှေတိဂုံ ထမနဲပွဲ ရဟန်းရှင်လူတို့ ဆင်နွှဲ မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၀၉ ယနေ့ကျရောက်မည့် တပို့တွဲလပြည့်တွင် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြမည့် ရွှေတိဂုံစေတီတော် ထမနဲအလှူပွဲတော်အတွက် ယမန်နေ့က ရွှေတိဂုံကုန်းတော်တွင် ရဟန်းရှင်လူတို့ ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြသည့် ထမနဲထိုးပွဲ မြင်ကွင်းကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ No tags for this post.
>Shwedagon in India
> (Photo: Weltenwanderer) အိန္ဒိယမှ ရွှေတိဂုံ ဓာတ်ပုံသတင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၀၉အိန္ဒိယနိုင်ငံ စီးပွားရေးမြို့တော် မွမ်ဘိုင်း (ဘုံဘေမြို့တော်) တွင် ယနေ့ ပြုလုပ်သည့် ကမ္ဘာ့ဝိပဿနာစေတီတော်ကြီး ထီးတော်တင် အခမ်းအနားမှ သံဃာများ။ အဆိုပါ စေတီကို ရန်ကုန်မှ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံစံအတိုင်း တည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ (Photo: Reuters)(Photo: Weltenwanderer) ပိုမိုသိရှိလိုပါက http://nyimuyar.blogspot.com/2009/02/global-vipassana-pagoda.html တွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ No tags for this post.
>Students Movement in Burma (04)
> ကိုဗဟိန်းမှသည် ကျော်ကိုကိုအထိ (၄)‘၁၉၃၆ ဒုတိယ တက္ကသိုလ်သပိတ်’အောင်ဝေးဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၀၉ ပထမ တက္ကသိုလ် သပိတ်ကြီး ပြီးလို့ (၁ဝ)နှစ် အကြာ ၁၉၃ဝ ဒီဇင်ဘာမှာ လယ်သမားသူပုန် ဂဠုန် တော်လှန်ရေးကြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ မရှေးမနှောင်းမှာပဲ ၁၉၃၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁) ရက်နေ့မှာ ‘တကသ’ လို့ ခေါ်တဲ့ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ စတင် ဖွဲ့စည်း ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့အစိုးရဟာ ၁၉၃၅ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို အိန္ဒိယကနေ ခွဲထုတ်လိုက်ပြီး (၉၁)ဌာန အုပ်ချုပ်ရေးကို သွတ်သွင်းလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန် ၁၉၃၅ မှာပဲ သခင်ဘသောင်းနဲ့ ပညာတတ် မြန်မာလူငယ်တစုဟာ ‘မြန်မာစာသည် တို့စာ၊ မြန်စကားသည် တို့စကား၊ သခင်မျိုးဟေ့...
>Maung Yit – Great Depression and MoeMaKa
> နှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက် စီးပွားပျက်ကပ်ထဲမှာ မိုးမခကို ထားရစ်ခဲ့ မောင်ရစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၀၉ ဇန်န၀ါရီ စကားကို ပရိသတ်ကြီးဆီ ဦးတည်ပြီး ရေးလိုက်ပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူးမှာ ဆုမွန်ကောင်း မတောင်းပေးရသေးဘူး။ ပြည်တွင်းရေးတွေ ပြည်ပရေးရာတွေ ဘာအရေး ညာအရေးတွေ မစားရ ၀ခမှန်း ရှေ့ကနေ ကုန်းအော်နေတော့ ကိုယ့်ဝိုင်းတော်သားအရေးတွေ၊ ကိုယ့်မီးဖိုချောင်အရေးတွေ လှည့်မကြည့်မိဘူး။ ဟော နှစ်သစ်ကူး ဇန်န၀ါရီလဆန်းမှာ တချက်ကလေး စောင်းငဲ့ကြည့်လိုက်တော့ ကိုဇာနည်ဝင်းက ထိုင်းကနေ “ဆ၀ါ့ဒီခပ်ပ်” လှမ်းလုပ်တယ်။ ဟာ … ဘယ်တုံးက ဆန်ဖရန်က ပြန်သွားတာတုံးလို့ မေးတော့ ခရီးသွားလက်မှတ်ရတာနဲ့ ဆရာကတော်ရှိရာ ထိုင်းနေပြည်တော်ကို ဒုံးစိုင်းပြန်သွားတာလို့ဆိုတယ်။ ဟိုမှာ စာနယ်ဇင်းအလုပ်လေးတွေ ခြေကောက်လိုက်လုပ်ရင်း ပျော်သလောက် နေဦးမှာတဲ့။ မိုးမခအလုပ်တွေကတော့...
>Moe Cho Thin – Habbit
> အကျင့်လေး တခု မိုးချိုသင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၀၉ လူတွေများ စကားပြောရင် ပုံစံအမျိုးမျိုး။ တချို့က ဖြေးဖြေးမှန်မှန် အသေအချာ စဉ်းစားပြီးတော့ ပြောတတ်တယ်။ တချို့ကတော့ အားတက်သရော မြန်မြန်ဆန်ဆန်။ တချို့ကတော့ တလျှောက်လုံး ငြိမ်နေပြီးမှ ပြောလိုက်တဲ့တလုံးကျတော့လဲ ပိဿာလေးနဲ့ နံဘေးပစ်သလို ပြောပြန်ရော။ အဲဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာလဲ ကိုယ်စွဲနေတဲ့စကားလုံးကို စကားပြောနေရင်း ထပ်ခါထပ်ခါ သုံးတတ်တာ သတိထားမိတယ်။ အခုတလော ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာရော၊ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေထဲမှာရော အဲဒါမျိုးလေးတွေကို ကိုယ် သတိထားမိနေတယ်။ အဲဒါကလဲ အထူးတလည် လုပ်ယူတာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် သတိမထားလိုက်မိခင် ဖြစ်သွားတတ်တာမျိုး။ အကျင့်ဖြစ်နေတာ လို့ ပြောရမလား မသိဘူး။ ကိုယ့်အမျိုးသားရဲ့ သူငယ်ချင်း နယူးယောက်ခ်က အကိုတယောက်ကတော့ စကားပြောရင်...
>MoeMaKa Win – Burmese Journals and Academy goes to Korea
> မြန်မာပြည်က ဂျာနယ်နဲ့ အကယ်ဒမီ ကိုရီးယားမှာ လုပ်သည် မိုးမခ ၀င်း ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၀၉ ဂျာနယ်တွေ ဂျာနယ်တွေ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ဂျာနယ်တွေ အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲလို့ လေ့လာကြည့်မိတယ်။ ထွက်နေတဲ့ ဂျာနယ်တွေက အများကြီးပဲပေ့ါ။ ဒီအထဲမှာ နံမယ်ကြီးပြီး လူဝယ်အများဆုံးက အားကစားဂျာနယ်တွေ ဖြစ်တယ်။ ဈေးကတော့ ၅၀၀ ကျပ်။ တချိူ့ဂျာနယ်တွေ ၆၀၀ ဖြစ်သွားတယ်။ အရင်ကတည်းက Weeklyeleven က ၆၀၀ကျပ် ဖြစ်နေတာ။ တချိူ့က ၄၀၀ ကျပ် နဲ့ ရောင်းနေတုန်းတွေ ရှိတယ်။ သတင်းတွေကတော့ အထူးသတင်းတွေ စုထားတယ် ဆိုပေမယ့် သိပြီးသားတွေ များတယ်။ နိုင်ငံခြားသတင်းတွေ များတယ်။ ကိုရီးယား မင်းသား မင်းသမီးတွေ အကြောင်း...
>the art of eating Mont-hin-gar
> မုန့်ဟင်းခါးစားခြင်းအနုပညာ ဇာနည်ဝင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်မှာ ပေါများတာ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်။ ရန်ကုန်ကို အထင်ကြီးတဲ့ထဲမှာ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်တွေ ပေါတာလည်း တချက် အပါအ၀င် ဆိုပါစို့ရဲ့။ ကွမ်းယာဆိုင်က ပိုပေါပေမယ့် ကွမ်းမကြိုက်တော့ လမ်းထိပ်တိုင်းလိုလိုမှာ ဖွင့်တတ်တဲ့ ကွမ်းယာဆိုင်တွေအကြောင်း စာမဖွဲ့တော့ဘူး။ ရန်ကုန်မှာ လေးနေရာလောက် ပြောင်းရွှေ့နေခဲ့ဖူးတာ တကြိမ်မှာတော့ တင်တင်အေးမုန့်ဟင်းခါးဆိုင်နားမှာ နေဖြစ်ခဲ့တယ်။ တင်တင်အေး မျက်စောင်းထိုးမှာ ဟိုဒင်း ရှိတယ်၊ စိန်ဥ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင် ရှိတယ်။ စိန်ဥဟင်းရည် အရောင်က ဆွဲဆောင်မှု မရှိဘူး၊ အရသာကတော့ ဂွတ်ရှယ်။ တင်တင်အေးဟင်းရည်ကတော့ စားသုံးသူအကြိုက် အရောင်အဆင်းနဲ့။ သူတို့မုန့်ဟင်းခါး၂ဆိုင် ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းသလဲ မေးရင်တော့ ၂ဆိုင်လုံး...
>Acadamy awards for 10 movies in 2007
> ၂၀၀၇ ရုပ်ရှင်များအတွက် အကယ်ဒမီဆုများ ယနေ့ပေးအပ်မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၀၀၆ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၀၉အကယ်ဒမီဆုကို ပြုံးရွှင်စွာ လက်ခံရယူနေသော ကျော်ရဲအောင် ၅၆ ကြိမ်မြောက် အကယ်ဒမီဆု (ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု) များ ပေးအပ်ပွဲကို ယနေ့ညနေပိုင်းက မြို့တော်သစ် နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇-ခုနှစ်တွင် ပြသခဲ့သော ရုပ်ရှင်ကားများကို စိစစ်ပြီး တပ်မတော်အစိုးရ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပေးအပ်သောဆုများဖြစ်သည်။ ပေးအပ်သော ဆုအရေအတွက် ၆ ခုမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။ ၁။ ဇာတ်ကားဆု- မြင့်မာလာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး၂။ ဒါရိုက်တာဆု – မောင်ယဉ်အောင်၃။ အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆု – ကျော်ရဲအောင်...
>Burmese Journal Digest – Feb 7th 2009
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၀၉ မြရိပ်ညို ဟိုတယ်ကို ဈေးပြိုင်ချရောင်းမည်။ အကြွေးမပေးနိုင်သည့် ဂိုးလ်ဒင်းဆွမ်း အဆောက်အဦ စည်ပင်က သိမ်းမည်။ ငွေဆောင်ကမ်းခြေ ဆိုင်ကယ် မစီးရ။ ကြက်ခြံများ မြို့ပြင်ထုတ်ရန်။ မက္ခရာဒေသကို ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်အဖြစ် သတ်မှတ်။ ရေမြောင်းဆယ် အမှိုက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကြွတ်ကြွတ်အိတ်များ ဖြစ်။ ပြည်မြို့တွင် အပြင်းစားကြက်လည်လိမ်ရောဂါ ဖြစ်။ စင်ကာပူသွား ကွန်တိန်နာတွင်းက ဘိန်းဖြူများ ဖမ်းမိ။ ဒီနေရာမှာ ဖတ်ပါ့။ No tags for this post.
>Thit Kaung Ein – Book Poem
> စာအုပ် အဖွဲ့အနွဲ့ သစ်ကောင်းအိမ် ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၀၉ အနာပေါ် ဆေးလိပ်မီးပွား ခါချသလို နေ့စွဲတွေ ကျရောက်နေပုံ တဖွားဖွား စကားလုံးတွေ လူကြားကောင်းတယ် အဖြစ်အပျက်တွေ လူကြားမကောင်းဘူး နေစောင်းလည်း မွန်းတည့်ကောင်းတုံး သေပန်းတွေ ပွင့်မဆုံးပုံက လူသေကို လူရှင်က ကြောက်ကြ ဒုက္ခပဲ….၊၊ မျောက်သွေးနဲ့ အားဆေး ဖော်ကြ ဒုက္ခပဲ….၊၊ မီးလန့်မှ အပျင်း ဆန့်ကြ ဒုက္ခပဲ….၊၊ ရှင်ဘုရင် လုပ်ချင် ဇာတ်ထဲ ၀င်ကြ ဒုက္ခပဲ….၊၊ ခွေးရူးကို တအို့အို့နဲ့ ခေါ်နေရတဲ့ကိစ္စ ဇစ်ပျက်ကြီးနဲ့ ရင်ကြားစေ့ကြ ဒုက္ခပဲ …၊၊ အရေပြားပေါ်က အယားပြေကိစ္စ တခုလိုသဘောထား လူထုရှုံ့ချပွဲမှာ ကြွေးကြော်သံ တိုင်သလို ဘ၀ကို သံယောင်လိုက် အော်နေပုံများ...
>letter for Daw Khin Khin Hla
> အမေကြားသိ အားရှိပါစေအရှင်ဉာဏိကဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၀၉ ဒကာမကြီး ဒေါ်ခင်ခင်လှ အ လ က (၄) ဆရာတော် ရဝေနွယ် (အင်းမ) နဲ့ ပေးလိုက်တဲ့ ဒကာမကြီးရဲ့ စာကို ဖတ်ရတယ်။ အဲဒီကတည်းက ပြန်စာရေးဖို့။ ရှေးကတော့ ပြောကြတယ်။ ကိစ္စများမြောင် လူတို့ဘောင် တဲ့။ ခုတော့ ကိစ္စများမြောင်က လူတို့ဘောင်ပါ မက ရဟန်းတော်တွေရဲ့ဘောင် ရောက်နေပြီလို့တောင် ပြောရမယ့်အထိ ဖြစ်နေပြီလား မသိဘူး။ ရဟန်းတော်တွေမှာလည်း ကိစ္စတွေက များများ။ ဒါတောင် ဦးဇင်းတို့က လူအများနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆက်ဆံမှု သိပ်ရှိတာ မဟုတ်သေးဘူး။ သိပ်ပြီး ထင်ရှား ကျော်ကြားတဲ့ ဆရာတော်များအတွက် ဆိုရင်တော့ ကိစ္စက များတယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့တောင် လုံလောက်ပါ့မလား...
>Burmese Junta collecting the list of political prisoners from outside source
> အကျဉ်းသားများ စာရင်းကို စစ်အစိုးရထောက်လှမ်းရေးက ပြန်လည်ကောက်ခံ မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၀၉ ပြည်တွင်းက ဝေးလံတဲ့ ဒေသများက အကျဉ်းထောင်များအနှံ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ပြောင်းရွှေ့ချုပ်နှောင်ခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာပိုင်များက ၎င်းတို့ရဲ့ အကျဉ်းသားစာရင်းကို ပြန်လည်စုဆောင်း ကောက်ခံနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အချို့ထောင်တွေထဲမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို တွေ့ဆုံခေါ်ယူ မေးမြန်းမှုတွေလည်း ပြုလုပ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်တဲ့ အိုင်စီအာရ်စီက ကောက်ခံထားတဲ့ စာရင်းကိုလည်း ရယူတိုက်ဆိုင်ကြည့်တယ်လို့လည်း အတည်မပြုနိုင်တဲ့ သတင်းတရပ်က ဆိုပါတယ်။ No tags for this post.
>NLD held 100 Year Anniversary of Min Thu Wun Birthday
> အင်န်အယ်ဒီပါတီလူငယ်များ မင်းသုဝဏ် ရာပြည့် စာဖတ်ဝိုင်းဖြင့် ဂုဏ်ပြု မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၀၉ ယမန်နေ့က ပါတီဌာနချုပ်မှာ လူငယ်များက စာဖတ်ဝိုင်းပြုလုပ်ပြီး မြန်မာစာပေလောကရဲ့ ရှေ့ဆောင်၊ အမျိုးသားစာဆိုကြီးနဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ပါတီမှာ ရပ်တည်ခဲ့သူ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ် ရာပြည့်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်းကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ No tags for this post.
>Myanmar Journal Digests – 31st Jan 2009
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၀၉ စာမူအဟောင်းကို ဘက်ဒိတ်နဲ့ ပြန်တင်တာပါ။ သတင်းခေါင်းစဉ် စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေက ဒီလို – တခါသုံး ဖုန်းကဒ်များထက် သာလွန်မယ့် သက်တမ်းတိုးဖုန်းကဒ်များ ဈေးကွက်ထဲ လာမည်။ Wi-Fi Network ကို ပြည်တွင်းက အထူးစိတ်ဝင်စား။ ပြည်တွင်းရေကြောင်းနဲ့ ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့က ၂၀၀၉ နှစ်ဆန်းအထိ နာဂစ်ဒေသ လူနာ ၁ သိန်း ၆ သောင်း ကုသစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်။ ပြည်တွင်းထုတ် လျှပ်စစ်ကားများ ဈေးကွက်ဝင်တော့မည်။ မြန်မာပြည် နှစ်ဦးပိုင်း အအေးပိုခြင်းမှာ လေအေးစီးကြောင်း ဖြတ်နေသောကြောင့်ဟု ဆို။ ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံ သမိုင်းအကျဉ်း။ မနောရမ္မ ပညာဒါန ကျောင်းက...
>Min Thu Wun – Poem
> မင်းသုဝဏ် – ပန်းသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၀၉ ပြန်လည်ဆန်းသစ် ကဗျာ သရုပ်ဖော် – အင်တာနက်မြန်မာပြက္ခဒိန် ဒီမှာ ရယူပါ No tags for this post.
>Tint Lwin – I-Paper and the Scribd and Burmese Literature
> I Paper သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်ရာ ၀က်ဆိုက် Scribd တင့်လွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၀၉ အင်တာနက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တဦးနဲ့ တဦးမသိကြပေမယ့် ကိုယ်မှာရှိတဲ့ သတင်း၊ စာတမ်း ။ အချက်အလက်မှတ်တမ်းများကို မိမိလိုပဲ စိတ်ဝင်စားသူတွေကို ဝေငှလိုတယ် ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့ မှတ်တမ်း မှတ်ရာဖိုင်တွေကို မိမိဘာသာသိမ်းဆည်းထား ချင်ရင် www.Scribd.com ၀က်ဆိုက်ဟာ အဲဒီလို ကိစ္စမျိုးကို အခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ ၀က်ဆိုက်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မိမိရဲ့ ဖိုင်တွေကို အခမဲ့သိမ်းထားနိုင်တဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေ အများအပြားရှိတဲ့ အနက် scribd ကတော့ မှတ်တမ်း မှတ်ရာဖိုင်တွေ ဘာမဆို ၀က်ဆိုက်ပေါ်တင်ပြီး သိမ်းထားခြင်း ၊ အများသူပါကြည့်နိုင်အောင်...
>refugees made in Burma
> ဒုက္ခရောက်သူများ မြန်မာပြည်တွင် ပြုလုပ်သည်ဒီအောင်ခင်ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၀၉ “လူတွေ ရွာလုံးကျွတ် ထွက်ပြေးနေရတယ်” ဆိုတဲ့သတင်းကို ဖတ်လိုက်ရင် “ဟုတ်ပါ့မလား၊ ဘာကြောင့် ပြေးရတာလဲ” လို့ မေးချင်သူများ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ရွာလုံးကျွတ် ပြေးနေရတဲ့ရွာတွေ အင်မတန် များတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရန်ကုန်သား မန္တလေးသားတွေ သင်တန်းတက်၊ ဘတ်စ်ကားတိုးစီး၊ ဗေဒင်ဆရာတွေဆီက အကြံတောင်း စတဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ ရုန်းကန်နေချိန်မှာ ကျေးလက်ဒေသတချို့မှာလည်း သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ရုန်းနေကြတာပါ။ ဘာကြောင့် ပြေးကြတာလဲရန်ကုန်သားများ ပြေးတယ်ဆိုတာကတော့ မီးလောင်တဲ့အချိန်တွေကျမှ တရပ်ကွက်လုံး ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ ရွာတွေမှာတော့ သေမှာကြောက်လို့ ပြေးတာပါ။ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ လှုပ်ရှားတဲ့ ဒေသတွေမှာ ဒီလိုပဲ ပြေးကြရပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့တွေ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ အပစ်ရပ်ရပ် မရပ်ရပ်...
>Min Thu Wun – 100 Year – Photo Album
> ရွှေလိုဝင်းတဲ့ မင်းသုဝဏ် ဓာတ်ပုံအယ်ဘန် မင်းသုဝဏ် ရာပြည့် အမှတ်တရ ကြည့်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၀၉ No tags for this post.
>Golden September – Unity & Peace Song Released
> ရွှေဝါရောင် စက်တင်ဘာ တေးဂီတ အဖွဲ့ သီချင်းသစ် ထုတ်ပြန် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ညီညွတ်ရေး တေးသံ ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၀၉ ဒီနေရာမှာ နားဆင်နိုင်ပါပြီ။ လက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ဝေပေးတော်မူကြပါ။ No tags for this post.
>Thit Kaung Ein – On Behalf of – Poem
> ကိုယ်စား သစ်ကောင်းအိမ် ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၀၉ ဒီတဆောင်း လွန်ရင် ပိတောက်နဲ့ မဝေးတော့ဘူး …. ဒီတပေါင်းမှာ ဒေါင်းတွန်သံများ ကြားရပါစေသား။ ။ (၂၆.၁. ၂၀၀၈) သရုပ်ဖော်ပုံ – ပန်းချီထိန်လင်းရဲ့ ပန်းချီကားတခုကို ယူသုံးထားတာပါ။ ခွင့်ပြုပါ။ No tags for this post.
>Maung Yit – How To Face Economy Distaster, which way
> စီးပွားပျက်ရာ ထန်းလက်နဲ့ကာ မောင်ရစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၀၉ အမေရိကန်နဲ့ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုက် (သကဲ့သို့) နေချိန်မှာ အစိုးရတွေသာမက လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေက အရေးယူ စီမံချက်တွေ ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံး အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေက ဒေ၀ါလီခံခြင်း၊ အစိုးရထံ လက်ဖြန့်ခြင်း၊ အလုပ်များ ရုတ်သိမ်းခြင်းနဲ့ အလုပ်သမားများ လျော့ချခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတလော နိုင်ငံတကာကလူတွေ အစိုးရတွေ လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံး ၀ိုင်းပြီး မော့ကြည့်နေကြတာက အမေရိကန်သမ္မတသစ်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ဘယ်လိုများ ဆောင်ရွက်ကြပါလိမ့်မလဲ လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရတွေကိုယ်တိုင်က ဗဟို (ဖက်ဒရယ်)က ဘယ်လိုများ ဆောင်ရွက်ကူညီမှု လမ်းညွှန်မှုတွေ ပေးမှာလိမ့်မလဲ ဆိုပြီး လုပ်လက်စတွေ၊...
>Maung Yit – Day Zero Problem
> Cartoon Maung Yit – Which is WhichFebruary 4th 2009 No tags for this post.
>Day one and day two in Thai-Burma border
> ဒေးဝမ်း၊ ဒေးတူးဇာနည်ဝင်းဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၀၉ ဒေးဝမ်းအလုပ်အလုပ် ၂ မျိုး ရှိတယ်။ “ဒေးဝမ်း၊ ဒေးတူး” (Day one, Day two)တဲ့။ ဒီ ဝေါဟာရသစ်တွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်လောက်တုန်းက ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာ စပြီး ကြားခဲ့ရတယ်။ အရေးကြီးတဲ့၊ လတ်တလော မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကို ဒေးဝမ်း အလုပ်လို့ ခေါ်ကြတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေ သုံးတဲ့ စကားလုံးဖြစ်တာကြောင့် ဒေးဝမ်းအလုပ် ဆိုတာ စစ်အစိုးရပြုတ်ဖို့၊ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့ လုပ်တဲ့အလုပ်တွေလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒေးတူးအလုပ် နောက်တနေ့အထိ ရွှေ့လို့ရတဲ့ အလုပ်တွေကို ဒေးတူးလို့ သတ်မှတ်ကြတယ်။ ကျန်းမာရေး ပညာပေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံတခု အပြောင်းအလဲ ကာလ အဆင်ပြေရေး...
Page 823 of 890«1...821822823824825...890»
>Burmese Activists to hand six hundred thousand over signature to UN's Ban Ki Mon for fee Burma
>SF Burmese Community to join Burma Signature Campaign with Suu
>Cartoon Saw Ngo - General becomes President?
Colgate – Palmolive ၏ ဒုတိယမြောက် ၅၄ သိန်းတန်ဖိုးရှိ ပညာသင်ဆုကို ၇ နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူကလေးမှ ဆွတ်ခူး
LA မြန်မာတွေက အောင်ဇေမီဒီယာ အွန်လိုင်းရုပ်သံလိုင်း ထုတ်လွှင့်
ကာတွန်းမင်းထက်လူရဲ့ အမှိုက်ပုံထဲထားခဲ့မယ် ထင်လို့လား … https://t.co/Uv4DamOkTz https://t.co/pN3n6yZWVN about 11 hours ago ReplyRetweetFavorite
မောင်မောင်စိုး ● အင်စတီကျူးရှင်းနိဒါန်း https://t.co/bivYJ0L4ly https://t.co/VFC07Vivpz about 11 hours ago ReplyRetweetFavorite